Flange Akara gasket SS316 / SS304 ASME B16.20 gburugburu ọnya gasket - CIXI DONGFENG Akara & nkwakọ ngwaahịa Co., Ltd
>lọ>ngwaahịa>Azụ gas gbara gburugburu
Flange Akara gasket SS316 / SS304 ASME B16.20 gburugburu ọnya gasket
FOB Ahịa: mkpakorita
Tụkwasịnụ Ikike: 10000 Iberibe / Nkeji kwa ọnwa
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: Western Union ma ọ bụ PayPal ， T / T, L / C.
Akuku sara mbara nke onodu oru di nma. Enwere ike iji ya n'okpuru nnukwu okpomọkụ, nrụgide dị elu na ọnọdụ okpomọkụ dị ala ma ọ bụ ọnọdụ agụụ. Gbanwee nchikota nke gasket ihe bu iji mee ka nsogbu nke nsogbu nke mgbasa ozi di iche iche di na gasket.
Ọ bụghị ihe siri ike chọrọ maka nkenke nkenke flange. Enwere ike iji ya mechie flanges nwere oke ike
Mfe echichi na kemfe were.
Ngwaahịa & Typedị
(Na Oxidizing Environment) -240 ~ + 550 ； ； (Na-abụghị Oxidizing Environment) -240 ~ + 870 ℃
(N'okpuru mmiri ọkụ, mmanụ wdg) 30 Mpa; (N'okpuru mmanụ alụlụ, gas na wdg.) 20 Mpa
Gasket gburugburu nke jupụtara na Asbestos
Gbasara ọnya ọnya jupụtara na PTFE
A na-ejikarị Gaskets gburugburu na-arụ ọrụ na valves & ọkpọkọ, arịa nrụgide, condenser, onye na-ekpo ọkụ ọkụ na mmanụ, kemịkal, nkà mmụta banyere ígwè, ụgbọ mmiri na ọrụ ntanetị.